Meksika : Ireto Ny Sasany Amin’Ireo Adihevitra Nanjaka Tao Amin’ny Aterineto Nandritra Ny Fifidianana Filoham-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 15:33 GMT
“Eo am-pifidianana solombavam-bahoaka any Meksika ny olona, ny 1 Jolay 2018. Mexico City, Meksika.” Saripika avy amin'i ProtoplasmaKid, nozaraina rehefa nahazoana alàlana sy nampiasàna ny lisansa Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.
Ity no fizarana farany amin'ny andian-dahatsoratra efatra natokana hanomezana ny fomba fijery momba ny votoaty manodidina ilay fifidianana farany teo tany Meksika. Ny mpandresy – tamin'ny elanelan'isa lavitra be – dia ilay mpandàla ny vahoaka M. López.
Efa navoakanay teto ny momba ny tantaran'ny fahaterahan'ny demokrasia meksikana, sy ny filazalazàna fohy ny momba ireo mpilatsaka ho fidiana tamin'ny fotoana izay nisoratan-dry zareo anarana ho fidiana. Nifanakalozantsika hevitra ihany koa ireo olana vitsivitsy izay mety hatrehan'izay ho filoha ho avy eo. Resahantsika izao ny olana amin'ny fomba fijery momba ny fahalalahan'ny fanehoankevitra, ny ahiahy amin'ny fampiasàna ny tambajotra sosialy ary ilay antsoina hoe vaovao tsy marina.
Mampitaintaina ny fifidianana any amin'ny firenena rehetra manerantany, ary mazava ho azy, tsy miavaka amin'izany fitsipika izany i Meksika. Tao amin'ny tambajotra sosialy, namela rojona adihevitra ny fizotry ny fifidianana filoham-pirenena. Ny mpanao gazety Ricardo Alemán, izay voaroaka tamin'ny haino aman-jery toy ny Televisa ( orinasam-pahitalavitra Meksikana lehibe ) sy ny Milenio ( gazety mahenika ny firenena), tamin'ny fampiasàna fomba fitenenana izay tsy nahafaly ireo mpanaradia ny filoha vao voafidy, Andrés M. López Obrador, tao amin'ny Twitter, dia ohatra iray miavaka amin'izany. Nizara bitsika izay nandrisika ny hanaovana herisetra amin'ny mpilatsaka ho fidiana ho filoha i Alemán, saingy fotoana fohy taty aoriana dia nilaza fa fampitandremana fotsiny izany. Efa nofafàna ilay bitsika ary efa namoaka fialàntsiny tamin'ny daholobe i Alemán.
Fifandirana ao amin'ny haino aman-jery mahazatra sy ny haino aman-jery sosialy
Nampiady hevitra lalina ireo ‘mpitari-kevitra’, isan'izany ny mpanao gazety Gabriel Guerra sy Julio Hernández avy ao amin'ny “Astillero,” ilay fandroahana an'i Ricardo Alemán tamin'ny May 2018, ary notateriny tamin'ny haino aman-jery mpampahalala vaovao iraisam-pirenena.
Noroahan'ny Televisa ilay mpanao gazety satria “nandrisika ny hanaovana herisetra” amin'ilay mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Noroahan'ny fantsona meksikana i Ricardo Alemán izay milaza fa tsy azon'ny olona ny tiany hambara, tamin'ilay bitsika izay toa miantso ny famonoana ny mpilatsaka ho fidiana López Obrador izay mitarika amin'ny fakàna ny hevi-bahoaka momba ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 1 Jolay.
Any Meksika, firenena iray izay ny fandrahonana tsy tapaka amin'ny fahalalahan'ny fanehoankevitra no fototry ny fandrakofana manokan'ny Global voices, dia mahazatra ny fandroahana mpanao gazety amin'ny toeram-piasàny noho ny fanaovany fanehoankevitra manelingelina ny olona. Ohatra iray miavaka amin'izany ny tranga nahazo an'i Carmen Aristegui, izay voaroaka noho ny nanaovany fanadihadiana am-pahibemaso ny filazàna ny fisotroan'ny filoha zava-pisotro misy alikaola be loatra nandritra ny fitondran'i Felope Calderón.
Sehatra lonaka ho an'ny fampiroboroboana ny ‘bot’ mandritra ny fihodinana amin'ny fifidianana ny haban-tranonkala toy ny Twitter, ary ny vavahadin-tserasera ADNpolítico dia nitatitra ireo fanamarihana maro momba ny mpilatsaka ho fidiana López Obrador avy amin'ny kaonty avy any Rosia. Naparitak'ireo ‘bots ‘ resahana eto ny hafatra ho an'ny tombontsoan'ity mpilatsaka ho fidiana ity ary manohitra ireo hafa. Ankoatra izay dia nisy tatitra mombanà ‘fanafihana an-tserasera’ atao amin'ny pejinà tranonkalam-pifanakalozan-kevitry ny antoko mpanohitra PAN (National Action Party) izay niampangàna an'i Juan Manuel López Obrador ho nanao kolikoly. Mitovy amin'izany ihany ny tatitra nataon'ny loharanom-baovao ao an-toerana El Diario de Yucatán :
Ny mpilatsaka ho fidiana avy amin'ny antoko Morena, Andrés Manuel López Obrador, no voalaza matetika ao amin'ny ‘bot’ rosiana, araka ny voalazan'i Manuel Cossío izay tompon'ny orinasa Raio Digital manao fanadihadiana momba ny mpanao politika sy ny fandraharahana.
Saingy tsy natao ho an'ny mpifaninana handresy ihany ny fampiasàna ny ‘bot’. Araka ny angondrakitra naparitaky ny El Economista, dia nampiasa kaonty sandoka tamin'ny tambajotra sosialy ihany koa ireo mpifaninana hafa rehetra nandritra ny fampielezankevitry ny tsirairay :
‘Bot’ marobe no manjaka amin'ny fifanakalozan-kevitry ny vahoaka any Meksika. Ireo rindrambaiko mandeha tsy vohizina izay manampy amin'ny fanamafisana na fampanginana ireo hafatra amin'ny tambajotra sosialy toy ny Twitter ireo no manjary mameno ny fifandraisana ara-kajimirindran'ireo mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena meksikana.
Ezaka iombonana hiadiana amin'ny filazàna vaovao tsy marina
Ny VerificadoMx, tetikasa iray noforonina taorian'ny horohorontany tamin'ny 19 septambra 2017, no nanana anjara goavana tamin'ny fifidianana. Ny ady amin'ny fampielezana vaovao diso sy fanamarinana ny angondrakitra avoakan'ireo mpanao politika no katsahin'ny VerificadoMx. Nanambatra ny heriny ireo ONG ( isan'izany ny Andininy 19) , ny haino aman-jery mahazatra (toy ny El Universal) ary ireo vondrona mpandinika (SocialTIC sy Cencos) mba hampandehanana io tetikasa io. Asehon'ity rohy ity ireo ohatra momba ny vaovao tsy marina isankarazany izay nolavina tamin'io ezaka io. Sopitas, vavahadin-tserasera izay nandray anjara tao amin'ny VerificadoMx, nanambatra ireo angombaovao izay heveriny fa vaovao tsy marina tena mampihomehy indrindra tamin'ny fifidianana.
Ara-potoana ny fahatongavan'ny fitaovana toy ny VerificadoMx, satria nanambara ny tompon'andraikitra misahana ny fifidianana fa nanao sonia fiarahamiasa amin'ny Facebook tamin'ny volana Febroary mba hisorohana ny fiparitahan'ny atao hoe vaovao tsy marina. Zavatra iray mampanahy ny maro izany, mihevitra mantsy ry zareo fa mety hanokatra làlana maro samihafa ho amin'ny sivana izany. Na izany aza, rehefa nambara ilay fifanarahana marina, dia toa tsy mazava tsara izany sady tsy nanery ny Facebook handray fepetra amin'ireo mpisera izany.
Ao amin'ny fanambaràna nangonin'ny vavahadin-tserasera Expansión, dia hifarana ny jolay 2018 ny asa ataon'ny VerificadoMx, nefa ohatra ny vao fiandohan'ny asa goavana no fahitana azy :
Ankoatra ny maha-hetsika izay ahitàna taratra ny hafanàm-po, dia asa fanaovan-gazety ny VerificadoMX, ary ambonin'izany, ny asa avelany amin'ireo haino aman-jery efa misy dia singa fototra iray izay very tao amin'io sehatra io : ny fanamarinana ny angondrakitra.
Ity no mamarana ny andian-dahatsoratry ny Global Voices natokana hanomezana fijery ankapobeny ny fifidianana filoham-pirenena meksikana. Amin'ny 1 desambra 2018 i Andrés M. López no handray ny asany, ho fantatsika amin'ny volana Aogositra 2018 ho avy io ny momba ny fikorontanana tamin'ny fandreseny ary ho rentsika ireo meksikana izay milaza fa mangetaheta fampihavanana taorian'ireo fampielezankevitra misafotofoto.